I2N Challenge Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သက်သာသော အာဟာရတန်ဖိုးပြည့်ဝသည့် အစားအသောက်များ ရရှိနိုင်ခြင်းသည် ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လျက်ရှိပြီး အစားအသောက်အုပ်စုများအားလုံးကို မျှတစွာနှင့် လုံလောက်စွာ မစားသုံးနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ ထိုကဲ့သိုသောပြသနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် စားသောက်ကုန်နယ်ပယ်အတွင်းတွင်ရှိသော တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သည် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သက်သာသော အာဟာရတန်ဖိုးပြည့်ဝသည့် အစားအသောက်များကို စားသုံးသူများ အထူးသဖြင့် ဝင်ငွေနိမ့်သော လူတန်းစားများနှင့် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်ရှိသော လူတန်းစားများ ထံသို လုံလောက်စွာဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက် အရေးပါသောနေရာတွင် ပါဝင်လျက်ရှိနေခြင်းမှာ ထိုကဲ့သို တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လူထုအား အာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးနိုင်ရန် ကောင်းမွန်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည့် သာဓကများလည်းရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သိုပြုလုပ်ရန်အတွက် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ပြသနာများကို ဖြေရှင်းရန် စနစ်တကျရေးဆွဲပြီး စွမ်းရည်မြှင့်နိုင်ရန် အရေးကြီးသော ဝန်ဆောင်မှုများ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ သုတေသန နှင့် ငွေကြေးများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းတစ်ခုလုံးသည် အထောက်အကူပြုသည့် အခြေအနေတွင် မရှိနေသောကြောင့် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ပြသနာများဖြေရှင်းရန် ထိုသို အရေးကြီးသော ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများကြုံရလျက်ရှိပါသည်။
SUN Business Network Myanmar သည် အာဟာရပြည့်ဝမှုအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းခေါင်းဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်နှင့် စုပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အထောက်အပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသော လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Impact Hub Yangon သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုစီးပွားရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်းတိုမှ တစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား အထောက်အပံ့ပေးနေသော အဖွဲအစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲအစည်းနှစ်ခုပူးပေါင်း၍ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သက်သာသော အာဟာရတန်ဖိုးပြည့်ဝသည့် အစားအသောက်များလက်လှမ်းမှီနိုင်ခြင်းကို ကန့်သတ်နေသော ပြသနာများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သော စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ရန် “The Innovate to Nourish (I2N) Myanmar Challenge” အစီအစဉ်ကို ယူဆောင်လာပါပြီ။
“The Innovate to Nourish (I2N) Challenge Myanmar
The Innovate to Nourish (I2N) Myanmar သည် SBN Myanmar ၏ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစိန်ခေါ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး စားသောက်ကုန်နယ်ပယ်အတွင်းမှာရှိသော အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် Startup များ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုစွမ်းအားကို အသုံးချကာ စားသောက်ကုန်နယ်ပယ်အတွင်းရှိ အစားအသောက်စနစ်များ၏ အာဟာရပြည့်ဝမှုကို ကန့်သတ်ထားသော ပြသနာများကို စနစ်တကျဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ယခုလှုပ်ရှားမှုသည် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ရှိပြီးသားစီးပွားရေးပုံစံငယ်များသို့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအသစ်များ ဖန်တီးရန်နှင့် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးပြီး ဆန်းသစ်သော စားသောက်ကုန်စနစ်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အန္တရာယ်များနှင့် ပြသနာများကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် စားသောက်ကုန်စနစ်၏ အသွင်ပြောင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို မြှင့်တင်ပြီး အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စားသုံးသူများထံသို့ဖြန့်ဝေရာတွင် အဓိကကျသော အရွေ့တစ်ခု ဖြစ်စေရန် ကူညီပံ့ပိုးမှုများပေးနိုင်သော ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၊ စားသောက်ကုန်နယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။
ယခုလှုပ်ရှားမှုသည် လက်ရှိစားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို စစ်ထုတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိသော အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ထိလွယ်ရှလွယ်သော လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများထံသို့ သက်သာပြီး အာဟာရပြည့်ဝသောစားသောက်ကုန်များ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် လိုအပ်သော ဆန်းသစ်သင့်လျော်ပြီး စီးပွားရေးအရလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော တီထွင်ဆန်းသစ်ဖန်တီးမှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
I2N Challenge Myanmar သည် မည်သို့သော
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု နယ်ပယ်များကို ရှာဖွေနေတာလဲ?
ယခုဖြေရှင်းချက်များ၏ ဥပမာများသည် အစားအသောက်လုံခြုံမှုနှင့်ဆိုင်သော နည်းပညာများနှင့် ကိရိယာများ၊ စားသုံးသူများ၏ ထိတွေ့ပါဝင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်သော ဖြေရှင်းချက်များ အစရှိသည့် ခြေရာကောက်နိုင်သော ဖြေရှင်းချက်များဖြစ်ပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများ နှင့် စိုက်ပျိုးရာနေရာမှ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်သော စီးပွားရေးပုံစံကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းချက်များဖြစ်ပါသည်။
ဖြည့်စွက်အစားအစာများ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် အာဟာရပြည့်ဝအောင်အထူးပြုလုပ်ထားသော အစေ့အဆံများ အစရှိသည့် စားသောက်ကုန်စည် ဖြေရှင်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကြက်ဘဲမွေးမြူရေးနှင့် အသားများ ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် အာဟာရသိပ်သည်းမှု ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်သော မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မျိုးမဆို ကြိုဆိုပါသည်။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ လုပ်သားများနှင့် ရုံးများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအသောက်များ လက်လှမ်းမှီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
စားသုံးသူများအား ကျန်မာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာများနှင့် အာဟာရတန်ဖိုးများ၏ အရေးပါမှုအား အသိပညာပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောဖြေရှင်းချက်များ
စားသုံးသူတို့၏ အသိရှိမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ အလယ်မှ နိုဝင်ဘာလ
စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတိုးတက်မှု (သင်တန်းနှင့် လမ်းပြအကြံပေးခြင်း)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အရှိန်မြှင့်သင်တန်း
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် အထောက်အပံ့ပေးသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
လုပ်ငန်းသည် အကျိုးအမြတ်ယူသော လုပ်ငန်းဖြစ်ရပါမည်။
လုပ်ငန်းသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်ရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်း၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးရောင်းရငွေသည် လုပ်ငန်း၏အသုံးစရိတ်များကို ကာပေးနိုင်ရပါမည်။
လုပ်ငန်းသည် ဝင်ငွေကျော်လွန်သောအဆင့်တွင် ရောက်နေသော အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀၀၀၀၀) အောက်ဝင်ငွေရှိရပါမည်။
လုပ်ငန်းသည် နည်းပညာဖြင့် ပြိုင်ပွဲ၏စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ စိန်ခေါ်မှုတစ်ချက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဖြေရှင်းချက်ကို ဖန်တီးရန် ကြိုးစားနေသောလုပ်ငန်းဖြစ်ရပါမည်။
လုပ်ငန်းသည် အာဟာရပြည့်ဝသော စားသောက်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဒေသတွင်း ဈေးကွက်များသို့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေပြီးဖော်ပြပါ အစားအသောက်တန်ဖိုးကွင်းဆက်များဖြစ်သော အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် ပဲအမျိုးမျိုး၊ အသားဓာတ်ကြွယ်ဝသော ဥနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ကြက်ဘဲမွေးမြူရေးနှင့် ငါးများ၊ အခြားသော အသားဓာတ်များ ဥပမာ-အင်းဆက်များ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော အစားအစာများ၊ အခွံမာသီးနှင့် အစေ့အဆံများ၊ အဆီပါဝင်မှုနည်းသောအသားများ နှင့် သန့်စင်ထားသော ဂျုံနှင့်စပါးမျိုးများကို လူထုများစားသုံးနိုင်ခြင်းသည်၄င်း၏စီးပွားရေးပုံစံငယ်ထဲတွင် အဓိကပါဝင်ရပါမည်။
သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များကို စနစ်တကျဖြေရှင်းနိုင်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများ ရရှိနိုင်ခြင်း
ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများ ရရှိနိုင်ခြင်း
စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ လက်လီရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်များနှင့် ပက်သက်၍ ပညာရှင်များထံမှ လမ်းညွန်ပြသမှုများ ရရှိနိုင်ခြင်း
ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာအကူအညီများကို မြှင့်တင်နိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်မှုများ ရရှိနိုင်ခြင်း
အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ လက်တွဲဖက်များနှင့် အထောက်အပံ့ပေးသူများသို့ သင့်စီးပွားရေးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ချပြနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရရှိနိုင်ခြင်း
ယခုပရိုဂရမ်မှ မည်သည်တို့ကို မျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
I2N Challenge Myanmar သည် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် startup များ စုစုပေါင်း (၁၀) ဖွဲ့အားရွေးချယ်ပြီး စနစ်တကျရွေးချယ်ထားသော နည်းပညာအကူအညီများ နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းများကို သင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်အကြံပေးမှုများဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပြီး ၄င်းတို့၏ တီထွင်ဆန်းသစ်သော စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အထောက်အပံ့ပေးသူများနှင့် အကဲဖြတ်သော ဒိုင်လူကြီးများ၏ရှေ့တွင် ချပြနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
I2N Challenge Myanmar ၏နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် ရွေးချယ်ခံရသော အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် startup များမှ နောက်ဆုံး တီထွင်ဆန်းသစ်သော စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များ ယှဉ်ပြိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အထောက်အပံ့ပေးသူများနှင့် အကဲဖြတ်သော ဒိုင်လူကြီးများ၏ရှေ့တွင် ၄င်းတို့၏းဖြေရှင်းချက်များ ချပြပြီး လုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ဆုများရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင်ဆုရရှိသောသူများသည် ဆုကြေးများနှင့် ဆုတံဆိပ်များ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Scaling Up Nutrition (SUN) လှုပ်ရှားမှုသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းခေါင်းဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်နှင့် အာဟာရပြည့်ဝမှုအတွက် စုပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အထောက်အပံ့ပေးရန် ၂၀၁၀ ခုနစ်တွင် စတင််မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ Sun Business Network (SBN) သည် နိုင်ငံတကာ ကွန်ရက်ကြီးလေးခုထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အထောက်အပံ့ပေးသောကွန်ရက်များနှင့်အတူတကွ SUN နိုင်ငံများကို အကူအညီပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) နှင့် UN World Food Programme (WFP) စသော အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနှင့် အတူ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများပါဝင်သော အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
SBN သည် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းပြသနာကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြေရှင်းရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဝန်ယူမှုရှိ၍ ရေရှည်တည်တံ့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများတွင် ရင်နှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ဖို့ စုစည်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် SBN သည် မိတ်ဖက်များချိတ်ဆက်နိုင်မည့် နေရာတစ်ခုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပြီး SUN ၏အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် နိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။